सम्भोगपछि गर्नुपर्ने एउटा काम ! – live 60media
सम्भोगपछि गर्नुपर्ने एउटा काम !
शा’रीरिक स’म्बन्धले स्वास्थ्यमा पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक असरको बारेमा धेरैलाई थाहा हुँदैन। विभिन्न अनुसन्धानले शारीरिक सम्बन्धले स्वास्थ्यमा पार्ने असरहरुको बारेमा तथ्यहरु निकालिसकेका छन्।
शा’रीरिक सम्ब’न्धको क्रममा हुने साना-साना गल्तिले पनि दैनिकीमा ठूलै असर पार्न सक्छ। शा’रीरिक सम्ब’न्धको क्रममा युवा-युवतीहरु थकाइ मार्नको लागि निदाउने पनि गर्छन्। तर यसरी निदाउनाले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन्। आफूलाई स्वस्थ राख्नको लागि शा’रीरिक स’म्बन्ध पछि अनिवार्य एउटा काम गर्नु राम्रो हुने बताउछन् । त्यो एउटा काम हो पिसाब गर्, स’म्भोग पछि पिसाब गर्नु अति उत्तम हुने चिकित्सकहरुको भनाइ छ।
शारी’रिक स’म्बन्ध पछि महिला मात्र नभई पुरुषहरुको नशा सफा गर्न पर्ने हुँदा शारीरि’क स’म्बन्ध पछि पिसाव गर्नाले धेरै फाइदा पुर्याउंछ। यसरी शारि’रीक सम्ब’न्ध पछि पिसाब गर्नाले नशा सफा मात्रै गर्ने नभई शरीरमा भएका ए’सिडहरु पनि शरीरबाट निस्कने गर्छ।
शारी’रिक सम्ब’न्धको समयमा शारिरको धेरै शक्ति प्रयोग हुने गर्छ। यसरी धेरै शक्ति प्रयोग हुँदा शरीरमा विभिन्न तत्वहरु उत्पन्न हुने गर्छ। यसरी उत्पन्न भएका तत्वहरु शरीरको लागि खतरनाक सावित हुन सक्छ। यसै कारण यस्ता तत्वहरु शरीरबाट तत्कालै फाल्नु पर्ने हुँदा शा’रीरिक स’म्बन्ध पछि पिसाब गरेको स्वास्थ्यको हिसावले धेरै राम्रो मानिने अध्ययनले देखाएको छ ।
थप समाचार- केटाहरू विवाहित महिलाप्रति आकर्षित हुने ५ कारण !
समाजमा पनि युवाहरु अविवाहित युवती भन्दा विवाहित महिलातर्फ बढी आकर्षित हुन्छन् भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ । केहि पहिल गरिएको एक अनुसन्धानले यो तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ ।
शोधमा यसको पछिको कारण पनि बताइएको छ आखिर पुरुषलाई विवाह गरेको महिला अन्य युवतीको तुलनामा किन आकर्षक लाग्छ ?
३. हर्मोन परिवर्तन
विवाहित महिला तर्फ अविवाहित पुरुष आकर्षित हुनाको अर्को पक्ष यौ’न रहेको छ । यौ’नस’म्बन्ध बारेको प्रस्तावका लागि अविवाहित भन्दा विवाहित सहज हुने युवाहरको अनुमान र अपेक्षा हुन्छ ।
प्रकाशित मिति : May 7, 2020
← आज डलरसहित अन्य देशको मुद्राको भाउ यस्तो छ :
सरकारले लकडाउनका खुकुलो बनाउने निर्णय गरेसंगै काठमाडौंमा यस्तो भयो →